दलान नेपाल : मधेशवाद के हो ?
मधेशवादको नाममा राजनीति गर्दै आएकाहरूले पनि मधेशवादको व्यवस्थापन, नामांकन, प्रयोजन, प्रयोग र परिणामबारे खासै प्रष्ट वा सचेत छैनन् । गैरमधेशी वर्चश्वको प्रतिरोधमा आधारित अर्थ राजनीतिक कार्यक्रमलाई मधेशवादको नाम दिँदै मधेशी नेताहरूले भावनामा बगेर अन्य समुदायमाथि दोषारोपण गरेर आजसम्म टिक्न सफल रहे पनि मधेशवादमाथि सर्वपक्षीय गहन वैचारिक अध्ययन, अनुसन्धान र सम्भवनाको खोजी हुनुपर्ने हो । जनसांख्यिक उपस्थिति, राजनीतिक चाहना एवं आस्थाको बारेमा बुझ्दै जाँदा विविधतामा एकताको प्रतिकको रुपमा जन्मेको “मधेशवाद” मधेश आन्दोलन तथा राज्यद्वारा अनुमोदित त भई नै सकेको छ । नेपाली राजनीति, संचार र समाजमा बहुचर्चित शब्दको रुपमा स्थानसमेत पाउँदै आएको छ । यसले आफ्नो औचित्य मधेश आन्दोलनमार्फत् साबित गरिसकेको छ । मधेशी जनताको परिवर्तित राजनीतिक आकांक्षा अनुकूल संघीयतासहित समानतामा आधारित संविधान नआउँदा वि.स. २०६३ मा प्रथम मधेश विद्रोह भएको हो । मधेशका सवालमा नियतवश उपेक्षा गर्न थालिएको अनुभूति भएपछि सात दलको सरकारका विरुद्ध दोस्रो मधेश विद्रोह भएको हो । मधेशमा बढ्दै गएको राजनीतिक सचेतना, अवसर र सम्भावनालाई आधार बनाएर विभिन्न विचारधारा र शक्ति केन्द्रहरूले आफ्नो आधिपत्य स्थापित गर्न खोजेको कुरा विगतका इतिहास, राजनीतिक कालखण्ड र जनचाहनाले प्रमाणित गरेकै छ । मधेशवादकै नाममा अहिले दुई दर्जनभन्दा बढी मधेश केन्द्रित राजनीतिक दल मधेशमै सक्रिय छन् भने प्रत्येक ठूला दलमा मधेशवादी भ्रातृ संगठन, मोर्चा, संघ–संस्था, संचारमाध्यम र वैचारिक केन्द्रहरूको गणना गरी साध्य छैन ।
वास्तवमा मधेशसम्बन्धी कुरा गर्नु नै मधेशवाद हो । वाद विचारकै विकसित रुप हुन्छ । वर्तमान समयमा कतिपय वादहरू समयसापेक्ष हुन नसकेकाले तिनीहरूको नयाँ व्याख्या र औचित्यमाथि बहस वा अनुसन्धान हुन जरुरी छ । हुनत अहिले पनि आफ्नो परिचय र उद्देश्यका साथ थुपै्र वादहरू अस्तित्वमा छन् । जसमध्ये विश्वका प्रमुख वादका रुपमा.......
५. श्रमिक संघवाद
६. श्रेणी समाजवाद
१७. लोकतान्त्रिक समाजवाद
बाहेक महिलावाद (नारीवाद), स्थानीयवाद (जरावाद) , नियतिवाद , माक्र्सवाद, लेनिनवाद, माओवाद, साम्राज्यवाद अर्थवाद, अध्यात्मकवाद, अराजकतावाद, अवसरवाद र प्रतिक्रियावाद, आदर्शवाद, आदिम साम्यवाद, उग्र राष्ट्रवाद, उग्रवाद, उदारतावाद, उपनिवेशवाद, ऐतिहासिक भौतिकवाद, कट्टरतावाद या जडसुत्रवाद, काल्पनिक समाजवाद द्वन्द्वत्मक भौतिकवाद, ऐतिहासिक भौतिकवाद, नक्सलवादी, नरोदवाद, नव उपनिवेशवाद, नाजीवाद, पुँजीवाद, पुनरुत्थानवाद, प्रभुत्ववाद र हैकमवाद, प्रुधोवाद, फासिँवाद, फेवियन समाजवाद, बकुनिनवाद, बामपन्थी दुष्साहसवाद र दक्षिणपन्थी अवसरवाद, ब्लाँकीवाद, वैज्ञानिक समाजवाद, माक्र्सवाद, यहुदीवाद, यान्त्रिक भौतिकवाद, लासालवाद, विस्तारवाद, संविधानवाद, सामन्तवाद, सुधारवाद र संशोधनवादलगायतका वादहरू अस्तित्वमै छन् ।
माओले २५ नोभेम्बर १९२८ मा चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठकमा “चिनकाङ्ग पहाडमा संघर्ष” शिर्षकको राजनीतिक प्रतिवेदनमा स्थानीयवादको प्रयोग गरेका थिए । (चाम्लिङ्ग भोजराज ः ; ५३, जातीय स्वतन्त्रता र आत्मनिर्णयको अधिकार)
बहसको केन्द्रमा रहेको मधेशवाद वास्तवमा वाद हो वा अन्दाज ? यदि यो अन्दाज हो भने पुँजीवाद वा साम्यवादी भएर पनि मधेशवादी हुन सकिन्छ । ठूल–ठूला सामन्तवादीहरू पनि मधेशवादी हुनसक्छन् । अन्दाज क्षणिक हुन्छ र अन्दाजले नीति र कार्यदिशा प्रष्ट्याउँदैन जसका कारण द्वन्द्वको सिर्जना हुन्छ । अन्दाजले विचार र ज्ञानलाई दिशाहीन बनाई दिन्छ । अन्दाजले द्वन्द्वलाई थप मलजल गर्ने काम मात्रै गर्छ जसबाट कसैलाई केही लाभ मिल्दैन । कुनै समयमा नेपाली राजनीतिमा मधेशी अन्दाजले ठूलै स्थान र भूमिका पाएको थियो – गर्भसँ कहू हम मधेशी छी, विदेशी भगोडा नई धर्तीपुत्र छी । त्यतिबेला मधेशी अन्जाद पनि कसैलाई स्वीकार्य थिएन । मधेशी अन्दाजलाई वादको रुपमा रुपान्तरित गरिनुपर्छ । यसका लागि दीर्घकालीन सोच, चिन्तन र योजनाको आवश्यकता हुनसक्छ । मधेशी र नेपालीसहितको दोयम परिचयमा कुनलाई प्राथमिकता दिने भन्ने कुरामा प्रष्ट भयो भने त्यसले परिचयको विवादलाई सहज बनाए जस्तै मधेशी अन्दाज, परिवर्तनको चाहना, स्वशासनको प्रयास र विभेद विरुद्धको संघर्षलाई नामांकन गर्न सकिएन भने यसले सामञ्जस्यताको साटो सैद्धान्तिक विचलन र भौगोलिक द्वन्द्व निम्त्याउन सक्छ ।
मधेशभित्र रहेको बहुविविधता र बहुलतालाई स्वीकार गर्नुपर्ने अवस्था छ । मधेशीहरूको विचार र मधेशीहरू प्रतिको विचारलाई सामञ्जस्यताका साथ सम्मानजनक परिचय दिन सकिएन वा यी सम्पूर्ण विचारहरूलाई एउटा दर्शनको रुपमा स्थापिय गराउन सकिएन भने मधेशवाद स्वतः अन्दाजमै सीमित रहिरहन्छ जुन हाम्रो नेपाली समाज र भूगोलका निमित्त हितकर नहुन सक्छ । त्यसैले मधेशी अन्दाजलाई वादमा परिणत गरिनुपर्छ ।
हुनत कुनै पनि जात, समुदाय वा स्वार्थमा “वाद” जोड्दैमा “वाद” हुँदैन । त्यसको राजनीतिक आधार हुनैपर्छ । वाद का लक्षणहरू बारे खोज्दै जाँदा तीन वटा प्रमुख सूत्रहरू पाइन्छ ।
पहिलो – विचारहरू नीतिमा र नीतिहरू अन्दाजमा प्रष्फुटित भएपछि त्यसको रुपान्तरण वादको रुपमा हुनजान्छ ।
दोस्रो – “वाद” हुनका निमित्त सिद्धान्त, पहिचान, भूगोल, प्रणाली र संरचना हुनुपर्छ ।
तेस्रो – राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक र सामरिक गरी “वाद” को चारवटा आधारहरू हुनुपर्छ ।
हुनत संसारभरि अस्तित्वमा रहेका सम्पूर्ण वादहरूमा माथिकै सबै आधार वा गुणहरू गणितीय परिणमझैं अंक र अंग मिलेकै छन् भन्ने पनि होइन । यद्यपि मधेशवादलाई कतिपय नेता र राजनीतिक विश्लेषकहरूले स्थानीयवाद र जरावादको संज्ञा पनि दिन्छन् तर मेरो अध्ययनमा मधेशवाद भनेको छुट्टै नयाँ वाद हो । वाद स्थापित हुन चाहिने प्रमुख आधार र गुणहरू मधेशवादमा पाइन्छ ।
मधेशीहरूको जीवन र जगतलाई बुझ्ने जीवनपरक दर्शन नै मधेशवाद हो । सरल भाषामा भन्ने हो भने मधेशसम्बन्धित कुरा गर्नु नै मधेशवाद हो ।
एक प्रान्त बहुसंस्कृति वा एक संस्कृति बहु प्रान्त बीचको द्वन्द्व मधेशमा छ । मधेशवादलाई जरावादको रुपमा व्याख्या गरिनु हुन् । यदि मधेशवाद ‘स्थानीयवाद वा जरावाद’ भयो भने त्यहाँ गैरमधेशी वा अन्य समुदाय अटाउन गाह्रो हुन्छ । यसलाई अर्थ राजनीतिको रुपमा हेरिनुपर्छ । मधेशवादलाई आन्तरिक उपनिवेशवादको प्रतिवादको रुपमा सीमित गर्न मिल्दैन । अर्थ राजनीतिको वैकल्पिक वादको रुपमा मधेशवादलाई स्थापित गर्न सकिन्छ ।
अतः मधेशको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक रुपान्तरणसँग सम्बन्धित वाद नै मधेशवाद हो । गतिहीनतालाई स्थायित्व र परिवर्तनशीलतालाई अस्थिरताको अर्थमा बुझ्दा नामबिनाको दर्शन र मार्ग बिनाको खोलालेझै अन्ततः माटो र जीवनलाई भययुक्त बनाई राख्छ । मधेशवाद चाहिएन भने मधेश अन्दाजतिर जान्छ जुन जोखिमपूर्ण हुनसक्छ । त्यसैले मुलुककै आधाभन्दा बढी जनसंख्या रहेको मधेशी समुदाय र सिंगो राष्ट्रको सामाजिक, आर्थिक विकास, अखण्डताको सुनिश्चितता र विकसित तथा समृद्ध नेपाल निर्माणका निमित्त मधेशवादलाई वादकै दर्जा दिन जरुरी छ ।
यो कार्यपत्र राजनितीशास्त्र अन्र्तगत मधेशवाद शिर्षकमा विद्यावारिधी गरिरहेका राजेश अहिराजले मंगलवार मधेशवादी राजनीतिमा युवाको भूमिका, नामक कार्यक्रममा प्रस्तुत गरेका थिए ।